गठबन्धनबाट सिक्ने कुरा - गजु Real - साप्ताहिक
आउनुहोस्, आज ‘गठबन्धन’को गजुरियल विश्लेषण गरौं । प्रसंग काङ्, खाङ्, सबै गठबन्धनको हो, वाम गठबन्धको मात्र होइन । काङ्ग्रेस र बाबुराम गठबन्धनको कुरा हो । अशोक राई र उपेन्द्र यादवको गठबन्धनको कुरा हो । राजावादी राप्रपा र जनवादी जनमोर्चाको कुरा हो । डन र धनको, गन र जनको गठबन्धनको कुरा पनि हो यो ।
उनीहरूबीचको वाकयुद्ध सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो, अब देशमा ‘वामयुद्ध’ सुरु हुनेवाला छ, तर चमत्कार नै भयो । ओली र प्रचण्ड रातारात मिलेपछि कार्यकर्ता पनि मिलेझैं गर्नैपर्‍यो । कार्यकर्ता मिलेपछि जनताले पनि पत्याउनैपर्‍यो । यो गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो फाइदा जनतालाई भएको गजुरियल बुझाइ छ ।
कसरी ? कसरी भने जनतालाई भ्रम थियो— राजनीतिमा अडान हुन्छ, मतभिन्नता हुन्छ, एजेन्डा हुन्छन्, तर रातारात एमाले र माओवादी गठबन्धन भएपछि जनताले के कुरा प्रस्ट रूपमा बुझे भने राजनीतिमा जे पनि हुन सक्दो रहेछ । राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भने जनताले किन मेरो पार्टी र तेरो पार्टी भनेर विभाजित हुनुपर्‍यो ? स्वविवेक प्रयोग गरेर जुन पार्टीमा गए पनि हुन्छ । जसलाई भोट हाले पनि हुन्छ भन्ने शिक्षा दुई ध्रुवका दुई ठूला पार्टीको गठबन्धनले दिएको गजुरियल ठम्याइ छ ।
पार्टीहरूको गठबन्धन तत्कालीन फाइदाका लागि हो, तर यसको शिक्षाले जनतालाई दीर्घकालिन फाइदा पुग्ने गजुरियल ठम्याइ छ । दुई दिनअघिसम्म एमालेको नजरमा माओवादी घनघोर लम्पसारवादी थियो । माओवादीको नजरमा एमाले खोक्रो राष्ट्रवादी थियो । केपी ओली र प्रचण्डहरू एक–अर्काका सबैभन्दा ठूला विरोधीझैं लाग्थ्यो । वामदेव–प्रचण्डको एक भेटमै त्यो बुझाइ सिसाको घरझैं झर्‍याम्–झुरुम् भयो । माथि त्यस्तो हुन्छ भने तलका कार्यकर्ताहरूले आफ्ना नेताका लागि ज्यान दिन जरुरी छैन भन्ने शिक्षा हामीले यो गठबन्धनबाट लिन सक्ने गजुरियल ठम्याइ छ ।